Wasiir Odowaa oo Ahlu Sunna ugu baaqay in ay ku soo biiraan Dowladda | Baydhabo Online
Wasiir Odowaa oo Ahlu Sunna ugu baaqay in ay ku soo biiraan Dowladda
Wasiirka Wasaarada Arimaha Gudaha Soomaaliya C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa) oo haatan ku sugan magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa halkaasi ka wada dadaalo la doonayo in la isugu keeno maamulada Galmudug iyo Ahlu Sunna.
Wasiir Odowaa ayaa sheegay in ururka Ahlu Sunna looga baahan yahay in ay la midoobaan maamulka Galmudug oo haatan fadhigiisu yahay magaalada Cadaado.
Waxa uu sidoo kale sheegay C/raxmaan Odowaa in muhiim ay tahay in danahooda laga fikiro dadka ku nool gobolada dhexe, sidoo kalena isqab qabsi uusan waxba tareynin.
Ururka Ahlu Sunna ee ka arimiya qeybo ka mid ah gobolada dhexe ee dalka ayaa horey u diiday in ay wada hadal la galaan maamulka Galmudug, waxaana ay sheegeen in ay wada hadal la galayaan dowladda federaalkaoo kaliya.
Baaqan ku aadan Midowga ururka Ahlu Sunna iyo Galmudug ayaa ku soo aadaya xilli dalka la filayo in ay ka dhacaan Doorashooyin, iyadoo Ahlu Sunna ay horey u sheegtay in ay doonayaan in ay xubno ku yeeshaan Aqalada Baarlamaanka ee haatan la soo dhisayo.